Banyere Anyị - Hebei Bocheng Co-ekike Nweta Ngwá Ọrụ Manufacturing Co., Ltd.
Kemgbe nguzo ya na 2001, Hebei Bocheng Co-Creation Measuring Tool Manufacturing Co., Ltd. enwetawo ihe ndekọ egwu pụrụ iche dịka onye nrụpụta nke ụdị ngwaọrụ dị iche iche ziri ezi. Mgbe ihe karịrị afọ 10 nke na-aga n'ihu ọhụrụ na mmepe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe kpụrụ otu kwadoro usoro na a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke arụpụtaghị. Anyị nọ n'ogo nke ụlọ, ọkachasị n'okike nke ike ọhụụ, ike teknụzụ na ahụmịhe mmepụta, wdg.
Anyị na-arụpụta a dịgasị iche iche nke nkenke ji atụ ngwaọrụ gụnyere igba ígwè n'elu efere, konkiri n'elu efere, ịgbado ọkụ table, modular 3D na 2D ịgbado ọkụ tebụl na fixtures na clamping, ahaziri konkiri na nkedo ígwè igwe akụkụ, ngwaahia ígwè nkpirikpi, dị iche iche ụdị Nkedo ígwè na akụrụngwa e ji atụ granite. Anyị factory nwekwara undertakes imewe, mmepe na n'ichepụta omenala ngwaahịa na-enye pụrụ iche nzube ngwọta na yiri akara nke n'ichepụta.
Ngwaahịa anyị nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dabara na ihe ndị ụlọ ọrụ dị mkpa dị na mba ahụ chọrọ. Companylọ ọrụ anyị nwekwara ụlọ ọrụ nyocha onwe onye, ​​ma webata ọtụtụ ngwa ọrụ nrụpụta dị elu. Site na njikwa njikwa dị mma na usoro nrụpụta dị elu, ogo igwe na oge nnyefe ejirila nke ọma. Maka nke a, akara ụlọ ọrụ na-anabatawanye ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi. Anyị na-emekwa mmepụta OEM maka ọtụtụ ụdị ụlọ na nke mba ọzọ.The ụlọ ọrụ ka mgbe emejuputa atumatu: "otu àgwà, ala ahịa; otu price, elu-edu" azụmahịa nkà ihe ọmụma, na mgbe niile na-ewere ụkpụrụ nke "iguzosi ike n'ezi ihe, mgba, ịrụsi ọrụ ike" dị ka a ebumnobi mmepe na "ahịa afọ ojuju" dị ka anyị ikpeazụ mgbaru ọsọ. Anyị dị njikere ịga n'ihu na ndị enyi niile n'aka. Obi ụtọ na-anabata anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na-eleta anyị ụlọ ọrụ maka nduzi. Ndị ọrụ niile nke Hebei Bocheng Co-Creation Measuring Tool Manufacturing Co., Ltd. na-atụ anya ịkwado gị n'eziokwu.